Kooxaha Chelsea iyo Sheffield United oo u Soo Baxay Semi-Finalka Koobka Capital One “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Chelsea iyo Sheffield United oo u Soo Baxay Semi-Finalka Koobka Capital One “SAWIRRO”
Kooxda Derby County oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa waxaa garoonkeeda Pride Park 1-3 uga badiyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii koowaad ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Filipe Luis ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad oo laad xur ahaa u dhaliyay kooxda Chelsea.
Ciyaaryahan Craig Bryson ayaa daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Derby County.
Ciyaryahan Jake Buxton ayaa daqiiqadii 78-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Derby County.
Ciyaaryahan Andre Schuerrle ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa markii 12-aad u soo baxday Semi-finalka koobka Capital One.
Kooxda Sheffield United oo ka ciyaarta heerka sedaxaad ee dalka ingiriiska ayaa u soo baxday Semi-finalka koobka Capital One,ka dib markii ay garoonkeeda Bramall Lane 1-0 uga badisay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Mark McNulty ayaa daqiiqadii 63-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Sheffield United.
Ciyaaryahan Florin Gardos dhamaadkii ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Southampton.
kooxda Southampton ayaa kulankii shanaad oo xiriir ah laga badiyay dhamaan tartamada.
Kooxda AFC Bournemouth oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka ingiriiska ayaa habeen danbe la ciyaari doonto kooxda Liverpool.
Sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur ayaa garoonkeeda White Hart Line habeen danbe kula ciyaareyso kooxda Newcastle United.
Real Madrid oo u Soo Baxday Finalka Koobka Naadiyada Aduunka “SAWIRRO”
Wasaaradda arrimaha gudaha oo raashin gar gaar ah u qeybisay dad naafo ah